Ciidamo ka tirsan Puntland oo ku sii jeeday Galgala oo dhexda dagaal ku qabsaday. – Radio Daljir
Galgala, May, 11 – Sida ay Daljir u sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda Puntland oo diiday in magacooda la xigto waxaa saaka dagaal ku qabsaday ciidamao ka tirsan dawladda Puntland duleedka Tuulada Galgala, halkaas oo xalay gacanta u gashay melleeshiyaad taageersan Max?ed Siciid Atam.
Waxaa la sheegay in dagaalka gaadmada ah ee saaka lagu qaaday ciidanka Puntland ee gurmadka ahaa ay ku dhinteen sadex Askari ayna dhaawacmeen dhawr kale, waxaana wararka qaar sheegayaan in dhimashadu timid ka dib markii ay miino la kacday gaari ay ciidanku wateen.
Dagaalka gaadmada ah ayaa ka dhacay deegaanka la yiraahdo Sugurre oo qiyaastii 10 KM u jira Galgala.
Sarkaalkaasi Daljir la hadlay waxa uu sheegay in ciidanku ay jabijeen kooxdaasi jidka u gashay ayna kale fiigeen kooxdaasi. Waxaana uu intaasi ku daray in ciidanku hawshooda sii wadan doonaan.